Efa saika hanainga teny Ivato… : fito vavy saika haondrana hampanambadiana any Sina | NewsMada
Efa saika hanainga teny Ivato… : fito vavy saika haondrana hampanambadiana any Sina
Voasambotry ny polisy avy ao amin’ny “Service central des enquetes spécialisées” teny amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato, ny alarobia lasa teo ireo tovovavy fito halefa hampanambadiana sinoa any Guangzhou Sina. Vidiana mihitsy ireto tovovavy Malagasy ireto…
Fantatra nandritra ny famotoran’ny polisy fa hampanambadiana sinoa izy ireo rehefa tonga any Guangzhou Sina. Nohamafisin’ny polisy eo anivon’ity sampandraharaha ity hatrany fa vehivavy Malagasy roa monina any Sina no tena atidoha mikotrika izao fivarotana tovovavy Malagasy izao halefa any Sina. Efa manana mpiray tsikombakomba aminy eto Madagasikara ireto vehivavy Malagasy roa mpivarotra olona ireto ka voasambotry ny polisy tamin’io fotoana io taorian’ny vela-pandrika ny tovolahy roa mpiara-miasa amin’izy ireo. Ny tovolahy iray amin’izy ireo dia voalaza fa mpikarakara ny pasipaoro sy ny “visa”-n’ireo tovovavy handeha ireo. Ny iray kosa mpampian-trano azy ireo eto Antananarivo mandra-pahatonga ny fotoana handehanany hihazo an’i Guangzhou. Mbola tratra tao an-tranon’ity farany ireo tovovavy miisa telo hafa izay vao tonga avy any Sambava ka nokasaina haondrana any Sina. Nilaza ireto tovolahy ireto nandritra ny fanadihadian’ny polisy fa maro ireo tovovavy Malagasy efa nalefan’izy ireo hanambady sinoa any Sina. Misy amin’ireo tovovavy anefa no mitaraina amin’ny ray aman-dreniny aty Madagasikara noho ny fampijaliana mahazo azy ireo any satria toy ny entam-barotra izy ireo rehefa tonga any noho izy ireo amidy amin’ny Sinoa. Ny vola azo amin’izany anefa mijanona ho an’ireo mpandefa sy ny mpanafatra fotsiny ihany.
Tsy lany ketrika mihitsy ireo mpanao tambajotra. Rehefa tsy nahita irika tany amin’ny fandefasana tovovavy hiasa any amin’ny tany Arabo, manjaka indray ny fivarotana tovovavy hampanambadiana ny kelimaso.